शनिबार आईओईमा हल्ट प्राइजको फाइनल कार्यक्रम हुँदै « Tech News Nepal
शनिबार आईओईमा हल्ट प्राइजको फाइनल कार्यक्रम हुँदै
काठमाडौं । ललितपुरस्थित पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीको संस्था नेक्स्ट जेन र हल्ट प्राइजको संयुक्त आयोजनामा शनिवार ‘हल्टप्राइज एट आईओई २०२०-२१’ कार्यक्रमको फाइनल कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ ।
केही अगाडि एकदमै लोकप्रियता कमाउन सफल भएको “उद्यमशीलता सम्बन्धी टक सिरिज” यही हल्ट प्राइज एट आईओई २०२०-२१ को पूर्व कार्यक्रम भएकाे बताइएकाे छ । अर्थात् यो शनिबार हुन लागिरहेको यसकाे मुख्य कार्यक्रम हो ।
उक्त कार्यक्रमको फाइनलमा कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, तेलेगु फिल्मस्टार तथा परोपकारी राम पोथिनेनी, युवामाझ एकदमै लोकप्रियता पाउन सफल भएका गायकहरू स्वप्न सुमन र सुदिन पोखरेलको उपस्थिति हुनेछ ।
यस्तै हल्ट प्राइजको ग्राण्ड फाइनलमा जजको रुपमा राजनीतिक तथा विकास पूर्वाधार सम्बन्धी विशेषज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य, वुनसल्टिङ प्रमुख परिचालन अधिकारी तथा गुगलका पूर्व-वरिष्ठ रणनीति र अपरेशन प्रबन्धक जेरी ली उपस्थित हुनेछन् ।
त्यस्तै उद्यमी तथा खाना र कृषि विज्ञ ल्युक स्मिथ, उद्यमी अरिफ नेजमी, पुरस्कार जित्दै आएका वरिष्ठ डाक्टरका साथै युएनको दीगो विकास लक्ष्यहरूको अधिवक्ता डा. अला मुराबित, युएन, विल एण्ड मेलिन्डा गेट्स इन्टिट्युट तथा एकदमै प्रभाव पार्न सकेका यसएम साइकत पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।
उनीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका १३ वटा इन्जिनियरिङ कलेजबाट सेमिफाइल तथा वाइल्डकार्डमा छानिएका २५ टिमहरूको आइडिया र प्रिजेन्टेसनबाट शीर्ष टिमहरूको छनोट गर्नेछन् ।
यी टिमहरूका लागि हल्ट प्राइज एट आईओई २०२०-२१ र पुल्चोक क्याम्पस विद्यार्थीको नेक्स्टजेन संस्थाले देश-विदेशका धेरै विज्ञहरू बोलाएर इन्टरनेटमार्फत नै विशेष कार्यशालाहरू र सल्लाहकार कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ ।
हल्ट प्राइज आइओई २०२१ मा सहभागी हुने प्रतिस्पर्धीहरुले कुल मिलाएर नेपाली १२ लाखका विभिन्न किसिमका पुस्कार तथा गिभअवेहरु पाउन सक्ने छन् । अन्तिममा पर्ने तीनवटा नेपाली विद्यार्थीहरुको टोलीले विदेशमा आयोजना हुने क्षेत्रीय प्रतिष्पर्धामा भाग लिन पनि पाउनेछन्।
५० भन्दा बढी मुलुकमा क्षेत्रिय प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धापछि अन्तिम कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा आयोजना हुन्छ। र, यही कार्यक्रममार्फत १० लाख अमेरिकी डलर रकम पाउने टोली छनोट हुनेछ।
हल्ट प्राइज एट आईओई २०२०-२१ को प्लाटिनम स्पाेन्सर नेपाल टेलिकम तथा गाेल्ड स्पाेन्सर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन् ।
सोही दिनमा धेरै कला प्रस्तुति र मनोरन्जात्मक कार्यक्रमहरू पनि हुनेछ । कार्यक्रम शनिबार १० देखि साँझ ७ बजेसम्म चल्ने छ। कार्यक्रममा सहभागी हुन यस लिङ्कमा गएर दर्ता हुनुपर्ने छ ।
काठमाडौं । हाम्रो पात्रोले ‘हाम्रो लर्निङ सेन्टर’ नामक फिचर थप गरेको छ । एउटै एपमार्फत
काठमाडौं । माइक्रोसफ्टले आयोजना गरेको इम्याजिन कप जुनियर २०२२ मा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेको टिम ‘अराइज’
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको काठमाडौं युनिभर्सिटी कम्प्युटर क्लब (केयूसीसी) काे आयाेजनामा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल हाइब्रिड
हेटौँडालाई वैज्ञानिक र प्रविधिमय बनाउने प्रयास
काठमाडौं । हेटौँडामा वैज्ञानिक एवम् प्रविधिमय वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ